Ny toerana misy ny server ve no mampisy fiantraikany amin'ny orinasa? Expertise avy amin'ny Semalt
Ny famokarana an-tserasera dia dingana sarotra izay ahafahanao manatratra tanjona an-tapitrisanyireo mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy. Ny orinasa sy ny mpandraharaha dia misafidy tsena an-tserasera noho ny fahafaha-manao tsy manam-petra amin'ny fanatrarana vaovaompanjifa maneran-tany. Maro ireo orinasa no nahomby tamin'ny fampielezan-keviny nomerika nomerika, noho ny fahaiza-manaony amin'ny sehatra goavana.
Io fahombiazana io dia mahatonga ny olona maro ho tafiditra amin'ny SEO kinendry - continental ice contact suv. Vokatr'izany, tranonkalaireo tompony dia maniry ny tranokalan'ny fampiantranoana ho firenena manokana, amin'ny sehatra fitantanana voafaritra manokana. Amin'ny tranga maro dia mety hisy olonamanontany tena hoe ahoana no hahombiazan'ny tetikady amin'ny geo tsy ampiasaina amin'ny toerana fandefim-pananana.
Max Bell, manam-pahaizana momba ny Semalt Ny serivisy nomerika dia mizara ny tsiambaratelon'ny tetik'ady ifotony amin'ny orinasa.
Voalohany dia misy ny fiheverana manan-danja mba handraisany anjara. Ohatra:
Ahoana ny hiatrehana ireo tranonkala amin'ny fiteny maro miaraka amin'ny toerana misy ny server
Ny fomba fanaovana pirintin'ny tranonkala dia mampiavaka ny fiteny faharoa avy amin'ny votoaty dika mitovy
Ahoana ny fomba fijerin'ny mpizara SEO
Inona ny fiantraikan'ny serivisy eo amin'ny toeram-piantsenako
Na izany aza, toa tsy misy fiantraikany amin'ny e-varotra ny toerana misy ny seriverafahombiazana intsony. Ny Tools Webmasters Google dia manana CDNs, izay afaka manamboatra filaharam-be voafaritra manokana ary azo antoka fa hahatratra ny sasany ny votoatinyIreo mpanjifan-tsambo voatokana dia midina amin'ny tsipika, izay mety ho azo tanterahina amin'ny fampiasana toerana misy seriver idealy.
Ahoana no ahafahan'ny tranonkala mandrindra firenena iray amin'ny fiteny iray
Ireo fitaovana maoderina toy ny Google sy Bing dia manana fitaovana webmaster, izayManolotra ny serivisy ho mikendry karazana fifamoivoizana manokana..Ao amin'ny Google Webmaster Tools, ity toerana ity dia hita ao amin'ny Search Traffic>Tanjona iraisam-pirenena> tabilao ao amin'ny firenena. Ny firenena te-hanatsara ny sivana dia tokony hiseho ao anatin'ny sakafo miafina. Amin'ny tranga sasany,Ny mpikirakira ny tranonkala dia afaka misafidy ny drafitra fampiantranoana izay manana sehatra ambony sokajy ho an'ny firenena. Ity CCDL ity dia mety ahitana URL toy ny Internetwww.mysite.de ho an'ny tranonkala Alemana. Ny fitaovam-pitadiavana toa an'i Google dia mampifandray io domains io miaraka amin'ity firenena manokana ity. Raha izany dia,Ny tranonkala toy izany dia tsy afaka ny hifanerasera amin'ny tranokala hafa.
Na izany aza, ny tranonkalan'ny sasany dia mampiasa domains goavam-be toy ny (.com, .org, sns.).Amin'ireny tranga ireny, ny mpampiasa dia manana safidy hananganana sehatra iray na sehatr'asa mpampiasa ny firenena iray hafa. Raha tsia, ny milina fikarohanadia mampifamatotra azy amin'ny alàlan'ny torolàlana hafa toy ny:
Backlinks manatona ny tranonkala
Adiresy IP an'ny mpizara
Ny toerana misy ny sombintsombiny ary
Fampahalalana momba ny fitaovana toy ny Google My Business
Azo atao ny manangana tranokala iray ao Espaina ary manisy ny fomba amam-panao rehetraamin'ny alemana mampiasa fitaovana Google na Bing Webmaster. Rehefa mampiantrano ireny tranonkala ireny dia zava-dehibe ny handinihana ny lafiny amin'ny pejy famandrihana pejy.Ny tranonkala dia mihodina haingana indrindra rehefa mipetraka ao amin'ny firenena ny mpizara tranonkala.
Ankoatra izany, ny vohikala iray dia afaka mifantoka amin'ny tontolo manerantany. Amin'ity tranga ity dia manoro hevitra i GoogleNy fampiasana ny lisitr'ireo lisitra tsy voapetraka ao amin'ny firenena dia midika fa ny safidy. Raha tsy manao izany ianao, dia mety handiso fanantenana sasany, indrindra noho nySEO manerantany, izay napetrak'i Google ao amin'ny tranonkala iray. Ny fampiasana tambajotra Wireless (CDN) dia zava-dehibe ihany koa. CDN mahombyNy tetikady dia manome iray amin'ireo tambajotra mavitrika mavitrika ary mamaly haingana ny tranonkala iray.